Tiantai Yongzhu Filter Factory dia lehibe ny nonwoven mpanamboatra lamba any Shina. dia efa nanokana ny vokatry ny fampiasam-bola eo amin'ny fanamboarana, atrikasa, sy ny fitaovana, fampidirana an-nandroso ara-teknika sy siansa avy amin'ny firenena vahiny.
Ny orinasa dia manana hery fanamboarana mahery ary tena mamokatra fitaovana fanivanana, vovoka fanesorana kitapo, fanjaitra nahatsapa, nonwoven sivana lamba sy ny rivotra-pana sivana. Ny vokatra efa naondrana any amin'ny firenena 40 mahery, anisan'izany i Azia Atsimo Atsinanana, Azia Afovoany, Eoropa, Aostralia ary Amerika.
Foana manokana izahay ho an'ny fikarohana ny vokatra vaovao, ka lasa andiana vokatra, toy izao manaraka izao:
1) High-hafanan'ny fitaovana sivana: Metamax fanjaitra nahatsapa, FMS nahatsapa fanjaitra, fiberglass nahatsapa fanjaitra, PTFE sarimihetsika nahatsapa fanjaitra, sarimihetsika fitaovana fanivanana, P84 nahatsapa fanjaitra, PPS fanjaitra nahatsapa, tsy tenona fitaovana fanivanana. Be izy ireo ampiharina amin'ny fampiasana avo-mafana vovoka fanesorana ao amin'ny orinasa ny mpampatsiro hanina sy smelt, tsy fandoroana, zavon'ny hery taranaka, hafanana-manohitra fitaovana, godorao pahoriana, arintany, simenitra, Coke, menaka may etona, sns
2) Rano-fanivanana vokatra: voatenona sivana-lamba, monofilament sivana-lamba, polypropylene nahatsapa fanjaitra, sarotra nahatsapa fanjaitra, izay fahita matetika amin'ny fitaovana ampiasaina ny maloto toy ny toetsika sy ny fehikibo-karazana sivana-gazety.
Miantehitra amin 'ny manan-karena hery, nandroso fitaovana, avo-kalitao vokatra sy ny asa fanompoana feno, Haotian efa nahazo an-toerana sy iraisam-pirenena na mpanjifa' matoky. Ny tanjona: mametraka foana izahay kalitao sy ny voninahitra ao amin'ny toerana zava-dehibe indrindra.
3) rivotra-pana sivana mesh.Widely ampiasaina amin'ny faritra toy ny fisarahana filtration sy ny orinasa (be mpampiasa amin'ny sakafo sy ny orinasa filtration sivana), ny orinasa ny solitany, simika, mpampatsiro hanina, simenitra, dedusting ny tontolo iainana sy ny ahy. Filtration tahan'ny mety ho avy amin'ny 27% ny 78%. Toy ny sakafo ho an'ny orinasa sy ny koba tsara toto sivana nitotoana azy nitotoana azy, ary ny hafa mihaohao heny fikosoham-bary. Toy ny gliokaozy famokarana, vovo-dronono, ronono soybean etc.